China Anime Foil Printing Pepa Tsika Washi Tape Australia vagadziri uye vatengesi |Washi Makers
Anime Foil Kudhinda Pepa Tsika Washi Tape Australia
Sticker roll washi tepi
Tepi yekunamirwa yewashi ine akawanda madiki ewashi uye anopindirana pamwechete.Inogona kupepetwa uye kuiswa kune chero chinhu zviri nyore.
Kazhinji saizi yakatenderedza 25mm-35mm, saizi yakakwana inogona kuita kuti chimiro chayo chichekwe zviri nani uye kuputirana.Imwe neimwe roll ichave neyakatenderedza 100pcs zvimiti.
Zvakare nepasi pepepa / firimu rakajeka rinogoneka, kana vaenzi vakarivhura, vanogona kuona zvakajeka chimiro chechinamira chimwe nechimwe.
▲ Unogona kundigadzirira tepi yangu yewashi here?
▼ Vagadziri veWashi vanofara kupa mhinduro pamusoro pekugadzira kwako asi panguva ino hatikwanisi kupa basa rakazara rekugadzira.Isu tinokurudzira kubata graphic dhizaini kana iwe uchida rubatsiro nekugadzira yako washi tepi mafaera.
Kusikwa kwese kwese kutenda kwedu uye gwara, chigadzirwa chitsva chichabuda mukati memwedzi mumwe zvakare isu taizochengeta pfungwa dzedu dziri nyowani uye kupfuura maindasitiri edu nekushivirira kwedu.Kurongeka kwese kunotipa mukana wekugadzira sevhisi nyowani uye isu taizoramba tichienda nguva dzese.
Zvakapfuura: Bvisa High Quality Stationery Diy Holographic Foil Washi Tape
Zvinotevera: Black And White Brown Grid Bronze Foil Box Set Blank Washi Tape
Rose Goridhe Washi Tape
3cm 2021 15Mm Inonyorwa Japanese Pepa 48 Rolls ...
30 Mapeji Pepa Zvinamirwa Katuni Zvinamirwa Kuronga...
Bvisa High Quality Stationery Diy Holographic F...
5Mm 15Mm Scrapbooking Pepa Masking Jumbo Roll ...
Rakanaka Rakadhindwa Rima Bhuruu Pepa Kutumira...
China Yakanyanya Kutengesa Chigadzirwa Bhasikoro Bhasikoro Yakaumbwa ...